काठमाडौं । फेला नै नपरेको ३३ किलो सुन तस्करीमा एसएसपी दिवेश लोहनी जस्ता ब्यवसायिक प्रहरी अधिकृतलाई थुनामा राखियो, उनीबिरुद्ध मुद्दा चलाइयो । एसएसपी लोहनी प्रहरी संगठनमा इमान्दार छविका मानिन्छन् । तर , उनी सुन तस्करीमा मुद्दा खेप्न बाध्य भए । उनको क्यारियर नै चौपट बनाइयो । संगठनको प्रमुख हुने लक्ष्यका साथ प्रहरी कर्तब्य निर्वाह गर्दा उनी षडयन्त्रको शिकार भए ।
संगठन प्रमुखले अडान लिएको भए लोहनी जस्ता प्रहरी अधिकृतहरु थुनामा जानुपर्ने थिएन । भेट्दै नभेटेको सुन तस्करीको आरोपमा प्रहरी अधिकृतलाई थुनामा राख्ने कामले गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ भए पनि त्यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको गुनासो सुनिन्छ । काबिल प्रहरी अधिकृतको मनोबल गिराउने काम गरेको गुनासो पनि छ ।
जटिल प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणमा जोखिम लिनसक्ने खुबी भएका एसपी लोहनी, डीएसपीद्वय अंगुर जीसी र कुमुद ढुंगेल पनि प्रहरी संगठनका क्षमतावान अधिकृत हुन् ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार दिनपछि बलात्कारका अभियुक्त पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सीआइबीबाट कन्चनपुरमा खटाइएका उनीमाथि हत्याको प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको छ । युवासंघका रुपन्देही अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यारा, करोडौं फिरौती माग्ने खुँखार अपराधी मनोज पुनदेखि सोम आले, केदार सहनीलाई इन्काउन्टर गर्ने डीएसपी कुमुद ढुंगेललाई पनि निलम्बन गरिएको छ ।
देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा भीमसेन थापा सेरिएर मर्नुपरेको थियो, भीमसेन थापाकै जस्तो नियति अहिले गृह मन्त्री रामवहादुर थापा बादलको कार्यकालमा प्रहरी संगठनमा एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपीद्वय अंगुर जीसी र कुमुद ढुंगेलले भोग्नुपरेको छ ।
संगठनमा लोहनी, जीसी र ढुंगेल जस्ता क्षमतावान अधिकृत कमै थिए, छन् र हुनेछन् । जोखिमपूर्ण काम गर्न रुचाउने यी तीनैै अधिकृत जहाँ जहाँ कार्यरत रहे, संगठनको शिर उचो बनाउने काम नै गरे । जुन संगठनमा उनीहरुले १५ बर्षदेखि २०–२२ बर्ष बिताए, ज्यानको बाजी लगाएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न रातदिन नभनी सक्रिय भए, त्यो संगठनले सम्मान र हौसला बढाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई सरकारले निलम्बन गरी दण्डित गरेको छ ।
२०७५ चैत २६ गते काठमाडौं सामाखुसीस्थित लालेन्द्र शेरचन्दको घरमा भएको डकैती प्रकरणमा पक्राउ परेका विकास श्रेष्ठसंग घटनाअघि डीएसपी ढुंगेलको मोबाइल सम्पर्क र भेटघाट भएको आरोपमा उनलाई निलम्बन गरिएको प्रहरी दाबी छ । तर, डकैती गर्ने श्रेष्ठस“ग कनेक्सन देखिएको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिएको छ । डकैतीको आरोप लगेका श्रेष्ठसंग ढुंगेलको सम्पर्कलाई आधार बनाएर उनलाई निलम्बन गरिएको छ । डकैतीका आरोपी श्रेष्ठले म्यासेज वा कल गरे पनि डीएसपी ढुंगेलले उत्तर नदिएको स्रोत बताउछ ।
प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन उसको नम्बर हेर्ने, कल गर्ने, कलडिटेल लिने सामान्य कुरा हुन् । तर त्यसैलाई आधार मानेर निलम्बन गर्ने हो भने त विगतमा मनोज पुन, सोम आले, केदार सहनी जस्ता अपराधीसम्म पुग्न पनि प्रहरीले मोवाइल वा फोन मार्फत् सम्पर्क ग¥यो होला ? सूचनाका लागि प्रहरीले आरोपीस“ग सम्पर्क गर्नै नहुने हो भने अपराधी कसरी पत्ता लाग्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ?
प्रहरीले अपराधीसम्म पुग्न अपराधीकै भेष पनि धारण गर्नुपर्ने, लागूऔषध कारोबारी पक्राउ गर्न लागूऔषध नै बोकेर गएका उदाहरण पनि छन् । यसरी कार्यसम्पन्न गर्न वा जिम्मेवारी पूरा गर्न अपराधीसंग कनेक्सन देखिएकै आधारमा काबिल प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बन गर्दै जाने हो भने भोलि संगठनमा कसले जोखिम मोल्ने ? फोर्सभित्र अहम् प्रश्न उठेको छ ।
सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या
२०६८ साल माघ ५ गते रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका २ सैपुकी १४ बर्षीया सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भयो । सुन्तली तामाङकी आमा डिल्लीमाया तामाङले छोरीको हत्यामा संलग्नको विरुद्धमा प्रहरीमा तत्कालै उजुरी पनि दिइन् । प्रहरीले हत्याका आरोपी श्याम राउतलाई पक्राउ पनि ग¥यो । तर राजनीतिक दबाबमा उनलाई छाडियो । छोरीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छोडेपछि डिल्लीमायालाई धेरै पीडा भयो ।
राउतले मैले नै हत्या गरेको हो भनेर प्रहरीकै अगाडि स्वीकार गर्दा पनि रामेछापका प्रहरी प्रमुख डीएसपी संजीव शर्मा दासले मिलेमतोमा छोडेका थिए ।
राजनीतिक दबाबमा राउत छुटेपछि आमा डिल्लीमायाले मानवअधिकारवादीहरुसंग गुहार मागिन् । साँढे पाँच बर्षसम्म कुनै सुनुवाई भएन । रामेछाप जिल्लामा आउने हरेक डीएसपीसंग छोरीको हत्यारा पक्राउ गरिदिन उनले विन्ती गरिन् । तर सबैले हुन्छ हुन्छ भनेर टारे, तर सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे ५ बर्षपछि जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रुपमा रामेछापमा गएका डीएसपी कुमुद ढुंगेलले हत्यारा राउतलाई पक्राउ गरे ।
धेरै मिहिनेत गरी उनले राउतलाई पक्राउ गरेका थिए । प्रहरीको मिलोमतोमा फरार अभियुक्तलाई ढुंगेलको टोलीले भारतको अण्डमान निकोबार टापुबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । साँढे पाँच बर्षदेखि न्यायको खोजीमा भौतारिएकी डिल्लीमायाले छोरीको हत्यारा पक्राउ पर्ने आशा गरेकी थिइनन् । तर डिल्लीमायाको न्याय पाउने हक डीएसपी ढुंगेलले दिलाएरै छाडेका थिए । सुन्तली तामाङका हत्यारा राउतलाई पक्राउ गरेर ल्याई २०७४ असार १२ मा सार्वजनिक गरेपछि खुसीको आशु झार्दै डिल्लीमायाले तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र डीएसपी ढुंगेललाई धन्यवाद दिएकी थिइन् ।
सुन्तली तामाङका हत्यारा राउतलाई पक्राउ गर्ने डीएसपी ढुंगेल त्यसपछि रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । सीआइबी र प्रहरीको टोलीले निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन र युवासंघ रुपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गर्ने मनोज पुन र उनका सहयोगी सोम आलेको ब्यापक खोजी गरेको थियो । प्रहरी टोली उनीहरुको खोजीमा भारतसमेत पुगेको थियो । भारतबाट नेपाल आएपछि पुन र आले २०७४ फागुन ९ मा इन्काउन्टरमा मारिएका थिए । प्रहरीबाट त्यतिबेला डीएसपी ढुंगेलले नै कमाण्ड गरेका थिए ।
मनोज पुनले गौचन र तिवारीको हत्यापछि रुपन्देही एमालेका नेताहरु धेरैको हत्याको सूची बनाएको उनको डायरीबाटै खुलेको थियो । रुपन्देही नेकपाका नेतादेखि मेयरसम्मको नाम उनको डायरीमा थियो । मनोज पुन र उनका सहयोगी आले इन्काउन्टरमा मारिएपछि ती नेताहरुसहित धेरैले शान्तिको श्वास फेरेका छन् । तर पुन र आलेलाई खोजी गर्नेदेखि इन्काउन्टर गर्ने डीएसपी अंगुर जीसी र कुमुद ढुंगेल भने दण्डित भएका छन् ।
गुण्डानाइके शुक्रे तामाङको पक्राउदेखि करोडौ करोडको क्रिकेटदेखि फुटवल खेलमा सट्टेबाजी (बाजी) नागराज नथमल अग्रवालसम्मलाई पक्राउ गर्ने काम पनि प्रहरीले नै गरेको थियो । जसमा डीएसपी ढुंगेलकै योगदान छ । गुण्डानाइके अभिषेक गिरी र रमेश बाहुनलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याउने पनि ढुंगेल नै थिए ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या गर्ने बाबु थापा, बबरमहल बमकाण्डका अभियुक्त पक्राउ गर्नेदेखि रेशम चौधरी पक्राउ गरी प्रहरी संगठनको शिर माथि उचालेका ढुंगेललाई डकैती गर्नेस“ग कनेक्सन भएको आरोपमा निलम्बन गरिएको छ ।
अपराधीको कनेक्सन खोज्ने हो भने सबै फस्ने ?
प्रहरीको काम अपराधी पक्राउ गर्ने हो । अपराधी पक्राउ गर्नका लागि ऊस“ग सम्पर्क हुन्छ । यसरी कनेक्सन खोज्दै जाने हो भने डीआइजी, एआइजी, आइजीपीसम्म पनि देखिनसक्छ । भाइबर, म्यासेन्जर, इमो, ह्वाट्सएप जस्ता प्रविधिको विकास नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कल चोरी ब्यापक हुने गरेको थियो ।
त्यसरी कल बाइपास गर्ने गौरबव शर्माहरुको कनेक्सन प्रहरी अधिकृत(हाल अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरसंग पनि देखिएको थियो । एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको नरसंहारको अनुसन्धान गरिरहेको सीआइबीले त्यस घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीको कनेक्सन डीआइजी महेशविक्रम शाहसंग रहेको प्रमाण फेला पा¥यो ।
मोवाइलमा कल वा म्यासेज गरेकै आधारमा प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने हो भने भोलि अपराधी पक्राउ गर्नका लागि उसंग सम्पर्क गर्ने सबै प्रहरी कारबाहीमा पर्नसक्नेछन् ।
(साँघु साप्ताहिक २०७६ बैशाख ३०)